Efatra Point Contact Ball Bearings - China Ningbo Shenhe-jaza
Efa-teboka fifandraisana baolina-jaza dia karazana tari-dalana tokana laharana avo roa heny angular fifandraisana baolina-jaza izy. Noho ny miavaka famolavolana ny raceway grooves ny peratra anaty sy ivelany peratra, dia misy hevitra roa fifandraisana eo amin'ny tsirairay sy ny Groove raceway baolina. Ny fifandraisana dia zoro 35 °. Ireo bearings dia afaka mitondra entana amin'ny avo roa heny axial toro-lalana. Ny fetran'ny hafainganam-pandeha ireo bearings tena avo sy tsara indrindra izy ireo fahavalo hafainganam-pandeha avo fangatahana.
A-teboka efatra fifandraisana mitondra baolina dia ahitana ny iray amin'ny peratra ivelany "paiso endriky" fizarana raceway Groove, ny mpivady ny roa-tapa anaty peratra, ary fivoriambe iray F baolina teo amin'ny varahina machined tranom-borona, namorona hevitra efatra fifandraisana. Ny teboka efatra fifandraisana baolina bearings dia tena ampiasaina ao amin'ny fampiharana ny milina fitaovana, ny hery fampitana ny lehibe Diesel fitaovana toy ny fanohanana sy ny mitondra entana naroson'ilay avo.
Next: Self-fampifanarahana Ball Bearings
Contact Ball mitondra
Efa-Points Contact Ball mitondra